Ireo fanamby amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa 5 (sy ny fomba fanitsiana azy ireo) | Martech Zone
Ireo fanamby amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa 5 (sy ny fomba fanitsiana azy ireo)
Zoma, Septambra 22, 2017 Douglas Karr
Mbola betsaka ny orinasa mino fa ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny marketing dia asa samy hafa ao anatin'ny fikambanana. Mampalahelo fa matetika ireo departemanta roa ireo dia mifanipaka ao anaty fikambanana iray. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa izao dia manana singa ampahibemaso mety hisy fiatraikany - ary manimba mihitsy aza - ny lazan'ny orinasa iray, manimba ny fandrosoana ataon'ny mpivarotra.
Na eo aza ny fanovana nomerika eo amin'ny sehatry ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny fanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa lehibe dia mbola ilaina amin'ny orinasa manerana ny indostria samihafa. Ireto ny fanamby lehibe amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ankehitriny sy ny fomba hamahanao azy ireo hanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa mahatahotra.
Companies like Dell, mpanjifa, ataovy tsara dia tsara, manome ny mpiasa tsirairay fiofanana momba ny fomba hampidirana ny haino aman-jery sosialy amin'ny hetsika ataon'izy ireo ary koa ny fanomezana loharanom-pahalalana mivantana ho an'ny mpanjifa azon'izy ireo jerena. Ity fomba fiasa ity dia miantoka ny fikirakiran'ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby na iza na iza iresahany ary aiza ny resaka.
Sparkle Training dia namolavola ity sary ity, ny Ny fanamby lehibe amin'ny serivisy 5 ho an'ny mpanjifa tamin'ny taona 2010 sy ny zavatra tokony hatao momba azy ireo.
Fomba manokana ny dia an'ny mpanjifa - orinasa maro no tsy mahavita manokana ny fifandraisan'ny mpanjifa, ka miteraka taha ambony, mampihena ny haavon'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ary mihena ny tsy fivadihana.
Manana fomba fijery feno momba ny mpanjifa - raha manana fidirana eo noho eo momba ny zava-dehibe momba ny vina sy varotra ny mpiasao dia manana fotoana tsara kokoa hanakatonana ny fifanarahana izy ireo na farafaharatsiny hanampiana ilay olona ary hamela fahatsapana tsy hay hadinoina.
Fiantohana ny fahombiazan'ny asa - Ny fomba fiasa rafitra sy mahomby amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa tsirairay dia manakiana. Izany dia mitaky ny rafi-pandaminana sy ny fizotrany tsirairay hivezivezy sy hifandaminana amin'ny fotoana tena izy.
Fampiasana Touchpoints ho an'ny mpanjifa samihafa - Ny mpanjifa izao dia manana safidy hifaneraserana amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa toy ny mailaka, lahatsoratra, antso, chat, ary media sosialy. Alao antoka fa manolotra azy ireo ianao.
Fandraisana an-tanana ny mpanjifa diso fanantenana - Ny fanantenan'ny mpanjifa dia avo kokoa noho ny hatramin'izay ary zava-dehibe ny fisian'ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny hafainganana ary ny fahaleovan-tenany hiantohana ny mpanjifa diso fanantenana ho lasa sambatra.
Na dia tsotra aza ireo fanamby dimy ireo, afaka mandany taona maro izy ireo hampidirana ny fikasan'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny rafi-pitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa sy hanome ny varotrao, ny varotrao ary ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ny vaovao ilain'izy ireo.
Tags: serivisy ho an'ny mpanjifa tezitraserivisy ho an'ny mpanjifa ratsyCRMSerivisy ho an'ny mpanjifafanamby amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifafahitan'ny mpanjifafampiofanana manjelanjelatrateboka mikasikafijerin'ny mpanjifa
Marketing amin'ny Podcast: Maninona ireo orinasa no mampiasa vola amin'ny podcasting
Fomba 9 handefasana ny hetsika B2B-nao amin'ny Event Tech